पेटमा छोरा छ कि छोरी जान्न चाहानुहुन्छ ? यस्ता देखिन्छन् लक्षण ! – Sandesh Press
September 22, 2021 346
काठमाडौँ । छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
यदि गर्भमा छोरी छ भने गर्भवती महिलामा महिला हार्मोनको मात्रा बढेको हुन्छ । त्यसैले उनी धेरै मुडी हुन्छिन्। त्यस्तै, शरीरक अंगहरुले पनि छोरा वा छोरी के छ भन्ने कुरामा संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
यदि महिलाको स्तनको टुप्पोको रंग बढी कालो हुँदै गयो भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । यदि ती महिलाको स्तनको रंगमा थोरै मात्र परिवर्तन भएको छ भने, उनको गर्भमा छोरी हुन्छ।
यदि गर्भवती महिलाको दायाँ स्तन बायाँ स्तनभन्दा ठूलो भएको छ भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ र यदि बायाँ स्तन दायाँ स्तनभन्दा ठूलो भएको छ भने, उनको गर्भमा छोरी हुन्छ । यदि गर्भवतीको पिसाबको रंग गाढा पहेंलो हुन्छ भने उनको गर्भमा छोरा रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यदि गर्भवतीको पिसाबको रंग हल्का छ भने उनको गर्भमा छोरी बसेको हुन्छ।
महिलाको खानपिनको शैलीले पनि गर्भमा छोरा वा छोरी छ भन्ने कुरा बताइरहेको हुन्छ। यदि गर्भवतीले नुनिलो खानेकुरा बढी मन पराउँछिन् भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ । त्यस्तै, यदि उनले गुलियो बढी मन पराउँछिन् भने उनको गर्भमा छोरी रहेको हुन्छ।
यदि गर्भवती महिलाको धड्कन सामान्य हुन्छ भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ र यदि गर्भवतीको धड्कन बढ्छ भने उनको गर्भमा छोरी रहेको हुन्छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाका श्रीमानको शरीरको तौल बढ्दै गएको छ भने, उनले छोरीलाई जन्म दिन्छिन् र यदि श्रीमानको तौल सामन्य छ भने उनले छोरालाई जन्म दिन्छिन्।छोरा या छोरी दुवै समान हुन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव तथा गर्भपतनका कारण गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गरिनु गैरकानुनी मानिन्छ । तर, यदि भेदभावको दृष्टिकोणले नभई उत्सुकता मेटाउनको लागि छोरा र छोरी के छ भन्ने जानकारी लिन चाहेमा आफैले घरमा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
यदि गर्भवती महिलाको धड्कन सामान्य हुन्छ भने उनको गर्भमा छोरा रहेको हुन्छ र यदि गर्भवतीको धड्कन बढ्छ भने उनको गर्भमा छोरी रहेको हुन्छ । त्यस्तै, गर्भवती महिलाका श्रीमानको शरीरको तौल बढ्दै गएको छ भने, उनले छोरीलाई जन्म दिन्छिन् र यदि श्रीमानको तौल सामन्य छ भने उनले छोरालाई जन्म दिन्छिन्।
Prevप्रियंकाकी सासू रबिनाले नातिनीको तस्बिर राखेर भनिन्, जीवनको यो चरणलाई बयान गर्न कुनै शब्द छैन
Nextटिकटक, पब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै बन्द गर्न अदालतको आदेश !
आज थपिएको निषेधाज्ञा यी इलोक्ट्रोनिक, हार्डवेयर पसल देखि यी पसल खुल्ने
तपाईलाई पिनाश छ ? उसोभए थाहा पाउनुहोस यसका लक्षण,समस्या र समाधानका उपायहरु
महिलाले गरिन ट्याक्सी चालक पुरुषको करणी !
केन्द्रविन्दु पोखरा पारेर एकाबिहानै भुकम्पको धक्का